Showing ९१-१०० of १७१ items.
इटहरी । सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नं ५ बलिया चौकबाट एक किमी भित्र रहेको नयाँ बृन्दाबन गौशाला धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्य बन्न थालेका छ । दाताहरुले दिएको दानबाट अहिले पर्यटकीय क्षेत्र गौशला अहिले पर्यटकहरु रमाउँने स्थानको रुपमा विकास हुन थालेको हो । पर्यटकहरुलाई आर्कषण गराउँन अहिले यस क्षेत्रमा भौतिक निमार्णको काम समेत भईरहेको राधेश्याम सेवा ट्रष्ट नयाँ बृन्दाबन गौशालाका संथापक संरक्षक दीनबन्धु शास्त्रीले जनाए ।२०६५ सालबाट सुरु भएको नयाँ बृन्दाबनले पर्यटकहरुको मन लोभ्याउँन थालेको उनी बताउँछन । ‘हामी यस नयाँ बृन्दाबनलाई पर्यटकहरुको आर्कषक केन्द्र बिन्दु बनाउँने तरखरमा छौं ।’– उनले
दमक/ पश्चिम इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–२ र ६ को सङ्गम स्थलमा पर्छ माङमालुङ । यो ठाउँ इलाम जिल्लामा रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । माङमालुङ इलाम सदरमुकामदेखि करिब १५ कोष पश्चिममा अवस्थित छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय महŒव बोकेको माङमालुङ समुद्री सतहबाट २ हजार १ सय मिटरको उचाइमा पर्दछ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण माङमालुङ पश्चिमी इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ६ को सङ्गमस्थलमा अवस्थित छ । करिब १५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको माङमालुङको छुटै मौलिक पहिचान र चिनारी रहेको छ । माङमालुङ ऐतिहासिक, प्राकृतिक, पुरातात्वि
सुन्तला नर्सरी अनुगमन
उदयपुर/ कृषि विभागले नष्ट गर्न निर्देशन दिएको एक सुन्तला नर्सरीलाई स्थानीय सरकारले अनुगमन गरेको छ । गत कात्तिकको दोस्रो हप्ता कृषि विभागले विभिन्न कारण देखाउँदै नर्सरी नष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको कोलबारी सुन्तला जात नर्सरी रौतामाई गाउँपालिका र वडाले अनुगमन गरेको हो । रौतामाई गाउँपालिका–४ सल्लेमा कृषक टेकबहादुर पाठकले करिब १५ वर्षदेखि नर्सरी फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा सुन्तलाको नर्सरी उत्पादन गर्दै आएका छन् । कृषिले नर्सरी नष्ट नै गर्नुपर्ने भने पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले नर्सरी अनुगमन गरेपछि तत्काल नष्ट गर्नु नपर्ने जनाएका छन् । नर्सरीमा कुनै त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेक
७१६ पटक पढिएको
धरानमा विकासको गति र पत्रकारिता
पत्रकारितालाई बौद्धिक व्यवसाय मानिन्छ । समाजमा शिक्षाको विकास जति चाँडो हुन्छ । यस्ता व्यवसाय अपनाउनेहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । समाचार पत्र पढ्ने बानी एक प्रकारको अम्मल जस्तै हो । त्यसैले दैनिक समाचार पत्र पढ्ने बानी भएकाहरू बिहानै पत्रिका किन्न निस्कन्छन् । धरानको उत्पत्तिको इतिहास १५० वर्ष भन्दा पुरानो छैन । यहाँ आर्थिक विकासका गति सुस्त भए पनि शैक्षिक विकासको गति भने चुस्त नै छ । वि.सं. २००३ सालमा पब्लिक हाइस्कुलको स्थापना शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको प्रगतिको प्रथम प्रयास हो । त्यसपछि २००८ साल मङ्सिर २७ गते पिण्डेश्वर संस्कृत विद्यालयको स्थापना भएर तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट उद्घा
प्रकाशित मितिः पुष २, २०७६
७६७ पटक पढिएको
सम्झेर एक गीतकार साथीलाई
सूचना र प्रविधिले ल्याएको यो चमत्कारले संसार ‘ग्लोबल भिलेज’भएर ‘भर्चुअल रिलेसन’सम्म अहिले हामीले सुविधाभोग गरिरहेका छौं । यसै सिलसिलामा नेपाली मुलकी हाल ‘क्यालीफोर्निया, यु.एस.ए. बस्दै गीत, कविता लेखेर नेपाली साहित्यलाई श्रीवृद्धि गर्न लागि परेकी एक स्थापित नाम राखी गौचनसित मेरो सामाजिक सञ्जालमा मित्रता बन्यो र यो मित्रता आत्मिय बनेर झाँगी रहेछ । मानवीय मूल्यहरू अर्थपूर्ण दृष्टिले खोतल्ने जमर्काे गरिरहेछु र यो क्रमजारी छ । अब प्रश्न उठ्छ, राखी गौचन कस्ता गीत लेखिन्छन् त ? त्यतातिर फूलबुट्टा भर्नु भन्दा पनि गीतका अनुरागी र पारखीले नै साक्षी स्वरूप यहाँ प्रस्तुत ग
ढल्यो बाम गढ
धरान/ सङ्घाई उपनामले परिचित धरानलाई प्रजातान्त्रिक दलले ६ दशकपछि भत्काउन सफल भएको छ । बाम नेता केदारनाथ खनालले २०१७ सालमा पहिलो पटक मेयरमा निर्वाचित भएपछि वीजारोपण भएको ‘बाम किल्ला’ लाई तिलक राईको नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले तोड्न सफल भएको हो । पहिलो पटक बाम विरासत तोड्ने क्रममा नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईलाई २ हजार ७ सय ९५ मतान्तरले काङ्ग्रेस उम्मेदवार तिलक राईले पराजित गरे । तिलक राईले २६ हजार ७ सय ९ मत प्राप्त गर्दा प्रकाश राईले २३ हजार ९ सय १४ मत प्राप्त गरे । तिलक राईले धरानमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेका छन् । जुन २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर तारा सुब्बाले ल्याएको म
१,१४५ पटक पढिएको
धरानमा शान्तिपूर्ण मतदान, ६० प्रतिशत मत खसेको अनुमान (फाेटाे फिचर)
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर र ७ नं. वडा अध्यक्षको मतदान शान्तिपूर्ण सकिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धरानका अन्ुसार मतपेटीका जम्मा हुने काम भइरहेको छ । कार्यालयले आधिकारीक संख्या सार्वजनिक गरेको छैन् ।बिहान ७ बजेदेखि शुरु भएको मतदान साँझ ५ बजे सकिएको हो । सहायक निर्वाचन अधिकृत निधीराज दाहालको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार ५८ देखि ६० प्रतिशत मत खसेको बताएका छन् । धरानमा २८ मतदानस्थलमा ९९ मतदान केन्द्र रहेको थियो । यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा ७९ हजार २ सय ८२ मतदाता थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा ५३ हजार ५ सय ४७ मत खसेको थयो ।
नेपालका विभिन्न ठाउँमा खाली रहेका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनको मौन अवधि शुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आचार संहिता अनुसार यो समयमा दलहरूले आमसभा गर्न, मत माग्न वा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन् । तर, नेपालकै निर्वाचनको इतिहास केलाउने हो भने पहिले निर्वाचनकै दिन पनि आमसभा हुन्थे । अहिलेको निर्वाचनमा दलहरुले आमसभा, पोष्टर, पम्प्लेटदेखि सञ्चार माध्यम हुँदै सामाजिक सञ्जालसम्म प्रचार गरे । तर, पहिले न युट्युब, फेसबुक थिए, न रेडियो, टेलिभिजन नै । त्यसबेला मतदाता आकर्षित गर्न रमाइलो शैलीमा पम्प्लेट छापिन्थ्यो । नेपालमा राणाशासनकै समयमा २००४ सालमा
९८१ पटक पढिएको
१,३८८ पटक पढिएको